ကြိုဆိုလျှက်ပါ မနန်းခင်ဇေယျာ – MoeMaKa Burmese News & Media
နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော်ကာလအတွင်း Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အနေနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့် အိုကီနာဝါကျွန်း ၂ဝ၁၂ နိုင်ငံတကာမယ်ပြိုင်ပွဲ၌ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ သော မနန်းခင်ဇေယျာသည် Miss Internet Award နှင့်အတူ People Choice Award ဆုနှစ်ဆုတို့အား ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ မရမ်းချောင်းကျေးရွာ ရှိ အနာကြီးဝေဒနာရှင်များထံသို့ သွားရောက်ကုသိုလ်ပြု လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် “အနိမ့်ကျဆုံး သော ကုသိုလ်အလုပ်မျိုးကို မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားရှိသူတို့သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အများပြည်သူတို့၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေး(စစ်ဘေး) အစ ရှိသည့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းရပ်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် (အခမဲ့) ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးဆပ် နေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)သို့ ၂၁.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် မနန်းခင် ဇေယျာသည် လာရောက် ၍ အလှူငွေ (၂) သိန်းကျပ်တိတိအား ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ပေးဆပ်မှုလုပ်ငန်းရပ်များဖြစ်သည့် နာရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ ပညာရေး အစရှိသည့် လုပ်ငန်းရပ်များအား ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူနှင့် အသင်းသားများတို့မှ လိုက်လံ ရှင်းလင်းပြသခဲ့သည်။ ထိုသို့ လေ့လာမှုပြုရာတွင် အသင်းတွင် သင်ကြားပို့ချပေးနေသော တက္ကသိုလ်ဝင် တန်း စာသင်စာကျက်ဝိုင်းသို့၎င်း၊ ကွန်ပြူတာသင်တန်းသို့၎င်း၊ သုခအလင်းစာကြည့်တိုက်သို့၎င်း၊ သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် ဆေးဝါးကုသနေကြသော လူနာများအား လိုက်လံကြည့်ရှု အားပေးကာ မြန်မာ နိုင်ငံလူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များအား (၇) ရက်စခန်းသွင်း၍ သင်ကြားပေးနေသော “စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း”မှ သင်တန်းသား/သူများနှင့် အချိန်ပိုင်း သင်တန်းနည်းပြတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုအလင်းဆက်(IR)တို့နှင့် ရင်းနှီးစွာ နှုတ်ဆက် စကားပြောကြားခဲ့ပြီး အမှတ်တရဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးပေးခဲ့သည်။ ကိုအလင်းဆက်(IR)နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူတို့မှ မိမိ၏ အောင်မြင်မှုကို လူမှုရေးလုပ်ငန်းရပ်များတွင် အသုံးချကာ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမည့် ပေးဆပ်မှုများလုပ်ဆောင်ပေးရန် တိုက်တွန်းစကားဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် မနန်းခင်ဇေယျာသည် နာရေးကူညီမှုအ သင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသား/သူများ၏ လူမှုရေးပေးဆပ်မှုများအား ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ကာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဧရာမောင်မောင်တို့အား တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် လုပ်အားပေးအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း ပြောကြား ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာပြည်သူလူထုတို့၏ ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို ခံယူခဲ့ရကာ အများပြည်သူတို့၏ အင်တာနက်မဲဆန္ဒကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ မြန်မာ့အလှကို ကမ္ဘာမှသိရှိအောင် စွမ်းဆောင် ပေးခဲ့သော မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးဖြစ်သူ မနန်းခင်ဇေယျာသည် အများပြည်သူတို့အတွက် ကူညီ ဖေးမပေးနေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် လာရောက်၍လုပ်အားဒါနများ ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ဆိုခြင်းသည် မြန်မာပြည်သူ/သားတို့အား ပြန်လည်၍ ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။ မနန်းခင်ဇေ ယျာနှင့် ဂုဏ်ပြုကဒ်ပြား လက်ခံမှုအား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ပြန်လည်မထွက်ခွာမီ မိမိအနေဖြင့် တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ်ခန့် အချိန်ပေး၍ နာရေးကူညီမှု (ဈာပနလမ်း ကြောင်း)တွင် လုပ်အားပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားပါမည်ဟု ဝမ်းသာအားရပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ စိတ်အား ထက်သန်စွာဖြင့် နုငယ်သော အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးမှ ရဲဝံ့စွာပြောကြားလိုက်သော စကားသံသည် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နှင့် အများပြည်သူလူထုတို့အပြင် သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များကပါ ဝမ်းသာအားရ သာဓုခေါ်ဆို ကြိုဆိုလိုက်ပါတော့သည်။
← ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုများ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – အထက်အောက် ချည်းကပ်နည်းဆိုလို့ →
October 27, 2012 October 27, 2012 Aung Htet
January 19, 2013 January 19, 2013 Aung Htet
ကျော်သူ – Happy New Year! အခမဲ့
2 thoughts on “ကြိုဆိုလျှက်ပါ မနန်းခင်ဇေယျာ”
You guy all do good jobs. ” Well done “.
Ko Zin Lin Oo says:
မင်္ဂလာသတင်းပါဘဲခင်ဗျား။ ရုပ်လှသလို နှလုံးသားလည်း လှတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ၊ အားကျမိပါတယ်။ အများအကြိုးအတွက် ပိုပြီလုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။